Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Nwachukwu Egbunike · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Nwachukwu Egbunike
Voadika ny 11 Marsa 2017 13:12 GMT
Nwach nanolotra ny fehinteny tamin'ny asa nifarimbonan'ny vondrona “Feo sy tsy fitongilanana” nandritra ny Vovonana GV taona 2012 tao Nairobi, Kenya
(Naoty : Ity andian-dahatsoratra ity dia miresaka ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny tranonkalan'ny Global Voices rehetra izay antsoina hanendry ny solontenan'izy mandritra ny roa taona ao amin'ny Filankevi-Pitantanan'ny fikambanana)
Nwachukwu Egbunike no anarako, poety, mpanonta ary mpikaroka momba ny media sosialy. Monina sy miasa ao Ibadan, Nigeria aho.
Nisy nanendry ho amin'ny fifidianana filankevi-pitantanan'ny Global Voices aho. Maniry aho ny hanompo amin'ny maha-solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo eo anivon'ny filankevi-pitantanan'ny GV.
Nanatevin-daharana ny Global Voices tamin'ny taona 2011 aho ary namoaka lahatsoratra ho an'ny GV, Advox ary Rising Voices. Ankoatra ny fanoratako ho an'ny GV, dia mandray anjara amin'ireo tetikasa maro isankarazany ao amin'ny fikambanana ihany koa aho. Ohatra, nanorolalana Nizeriana tanora iray aho tamin'ny taona 2012 tamin'ny alalan'ny fanomanana bilaogera GV / Action Aid Activista. Tamin'ny taona 2012 ihany, zara raha herintaona teto anivon'ny Global Voices, nanolo-kevitra aho ny amin'ny tokony hahafahan'ny mpanoratra ato amin'ny GV mamoaka ny “ny feon[ny]”. Niteraka adihevitra [virtoaly sy nifanatreha-maso] taloha sy taorian'ny vovonana izany tolo-kevitra izany. Avy eo izahay nampanao fitsapan-kevitra teo anivon'ny fikambanana, nampifanandrify ny vokatra ary nametraka ny valiny tany amin'ny ekipa fototra (core team). Tamin'ny maha-lehiben'io vondrona io ahy, navadika ho The Bridge-Ny Tetezana io tolokevitray io avy eo. Iray amin'ireo mpanao lahavolana nanentana ny “Occupy Everywhere” nandritra ny Global Voices Citizen Media Summit notontosaina tao Nairobi, Kenya tamin'ny jona 2012 aho tamin'io fotoana io.
Tamin'ny taona 2014, raha izaho irery no mpanoratry ny GV tao Nigeria, nikarakara ny GV Meet-Up voalohany tao Lagos aho. Ny fiarahana miasa tamin'ny talen'ny Rising Voices (Eddie Avila) sy ny lehiben'ny fanoratan'ny GV (Solana Larsen) fahiny no nahafahako nanatontosa fiaraha-miombon'antoka tamin'ny oniversite iray tao Lagos, nampahafantatra ny GV tamin'ny bilaogera nizeriana sy tamin'ireo mpikatroka nomerika.
Mpikambana tao amin'ilay vondrona Advox Core (2013 – 2014) efa nodimandry aho. Tamin'ny fisamborana ireo bilaogera ethiopiana ao amin'ny Zone9, niara-niasa akaiky tamin'ny talem-paritra Afrika atsimon'i Sahara sy ny talen'ny Advox aho mba hahafantaran'ny besinimaro izany toe-javatra izany. Ny tetipanorona voalohany nentinay tamin'izany dia nanao fanentanana amin'ny alalan'ny media sosialy nahafahana nanararaotra ny fahamaroana sy ny fahasamihafana misy ato amin'ny fikambanana GV. Niara-nikarakara ny Tweetathon Afrikana golobaka voalohany notontosaina 14 mey 2014 aho. Niteraka fironana tany amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao io fisiahana faobe momba ny #FreeZone9Bloggers io ary noraisin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ihany koa. Avy eo io hetsika io narahin'ny andian-dahatsoratra hoe “Manana anarana izy ireo” tao amin'ny Advox izay lasa nahafantarana tsirairay ireo mpikambana ao amin'ny bilaogy Zone9, izay nogadraina tao Ethiopia tamin'ny fanendrikendrehana ho manao fampihorohoroana. Fa navotsotra ihany izy ireo avy eo.
Famakiana ny fanambaran'ny Lecture des déclarations pour les blogueurs emprisonnés – avec Arzu Geybullayeva, Jannie Lung, Mohamad Najem, Laura Vidal, Nwachukwu Egbunike et Thant Sin à Cebu City, Philippines. (Crédit photo: Rai M Azlan)
Nanoratra sy namaky ny Antso hamoahana ireo olon-tsotra tia mamoaka vaovao nogadraina manerana izao tontolo izao izahay nandritra ny lanonam-panokafana ny vovonan'ny Citizen Media tao Cebu, Filipina tamin'ny janoary 2015.
Any amin'ny Oniversite, ny toham-pikarohana hahazoana diplaoma Master voalohany dia miompana amin'ny seraseran'ny fampandrosoana ary ny faharoa kosa miompana amin'ny media sy ny hetsika sosialy. Mikarakara ny dôktôrà momba ny media sosialy, ny fandraisana anjara politikan'ny tanora ary ny fokom-pirenena aho amin'izao fotoana izao. Efa namoaka lahatsoratra tamin'ny gazetiboky sy toko vitsivitsy tanaty boky aho. Efa nanoratra boky anankiroa : Dyed Thoughts, a conversation in and from my Country (2012) [Eritreritra voaloko, resadresaka iray tao sy avy amin'ny fireneko] sy angon-tononkalo mitondra ny lohateny hoe, Blazing Moon, izay tonga faharoa tamin'ny fifaninanan'ny taona 2015 tamin'ny lokan'ny Fikambanan'ny mpanoratra nizeriana teo amin'ny sehatry ny poezia [Association of Nigerian Authors Prize for Poetry] aho.
Global Voices Izahay! - Manompo amin'ny maha-solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo eo anivon'ny Filankevi-pitantanan'ny Global Voices
Nanoratra toy izao aho nandritra ny fahafolo taona ny Global Voices :
.What struck me and has remained remarkable till now, is the strong family spirit. It’s so natural that despite the great diversity, GV community was built on a strong respect of each individual’s opinion and also world views
Ny tena nandona ahy ary mbola voamarika hatramin'izao dia ny fisian'ny fanahim-pianakaviana matanjaka. Tahaka ny tena voajanahary tokoa na dia eo aza ny fahasamihafana, naorina tao anatin'ny fanajana ny hevitry ny tsirairay sy ny fijery avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao
Izany amin'ny ankapobeny ny antony nampazoto ahy ato amin'ny Global Voices. Izany ihany koa no antony aniriako handraisana anjara eo anivon'ny filankevitra. Mino aho, miaraka amin'ny hafa, fa hanamafy ny fifandraisana mahatonga antsika ho fiarahamonina tsy manam-paharoa. Raha ny hevitro, izany no fototry ny fandraisantsika andraikitra ao anatin'ny tontolo ankehitriny. Amin'ny maha fikambanana, tsy maintsy miasa ho toy ny tetezana mampifandray isika fa tsy rindrina mampisaraka.
Mangataka ny latsa-batonareo aho noho izany mba hiasa ho anareo amin'ny maha solontenan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ahy eo anivon'ny Filankevi-pitantanan'ny Global Voices. Manome antoka anareo aho fa hametraka ny fahavononako izay nitarika ny endriky ny fandraisako anjara rehetra tao anatin'ny GV hatramin'ny 2011.
Isika no Tetezana, Isika no Global Voices!
Vondrona Global Voices nalaina sary tamin'ny drôna (Sary: Jeremy Clark)
Miaraka amin'ny tantara
Milaza tantara isika
Milaza tantara miafina isika
Isika no feon'ny tsy manam-peo
Raisintsika manokana izany
Isika no Tetezana
Global Voices isika!
 Nwachukwu Egbunike, “The Bridge” tao amin'ny Blazing Moon (2015), p 95
02 Aogositra 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana